Mashandisiro Ekushandisa Zoom Musangano Kurekodha Remote Guest Pane Yako Podcast mune Separate Makwara | Martech Zone
Mashandisiro Ekushandisa Zoom Musangano Kurekodha Remote Guest Pane Yako Podcast mune Akaparadzaniswa Mateki
Chishanu, July 23, 2021 Chishanu, July 23, 2021 Douglas Karr
Ini handikwanise kukuudza maturusi ese andakamboshandisa kana kunyorera munguva yakapfuura kunyora podcast kubvunzurudza uri kure - uye ndaive nematambudziko neese acho. Zvaisave nebasa kuti kugona kwangu kwakange kwakanaka sei kana mhando yemahara… zvinhu zvenguva pfupi zvekubatanidza uye mhando yeodhiyo nguva zhinji zvaigadzira ini kukanda podcast.
Yekupedzisira yakanaka yekushandisa iyo yandaishandisa yaive Skype, asi kugamuchirwa kwekushandisa kwanga kusati kwapararira saka vashanyi vangu vanenge vaigara vaine matambudziko kurodha pasi uye kusaina Skype. Pamusoro pezvo, panguva iyo yandaifanirwa kushandisa yakatengwa wedzera-on ye Skype kunyora uye kutumira imwe neimwe track.
Zoom: Iyo Yakakwana Podcast Shamwari
Mumwe wandaishanda naye aindibvunza kuti ndakanyora sei vashanyi vari kure rimwe zuva uye ndikamuudza kuti ndakashandisa Zoom's musangano software. Akapepereswa pandakamuudza kuti sei… sarudzo muZoom inokutendera kuti utorese mushanyi wega wega seyawo track track. Ingoenda ku Zvirongwa> Kurekodha uye iwe uchawana sarudzo:
Pandinorekodha bvunzurudzo, ini ndinogara ndichichengeta odhiyo kukombuta yemuno. Kana kubvunzurudza kwapera, Zoom inotumira kunze odhiyo kudhairekitori renzvimbo. Paunovhura dhairekitori rekuenda, iwe unowana yega yega track iri mune dhairekitori rakatumidzwa zita zvinyoronyoro uye ipapo yega nzira yemubatanidzwa inosanganisirwa
Izvi zvinoita kuti ndikurumidze kuendesa yega yega yeanoteerera mateki muGarageband, ndigadzirise zvinodiwa kuti ubvise kukosora kana kukanganisa kubva panzira yandinoda, wedzera ma intros uye outros, uye wozotumira kune yangu podcast inomiririra.
Ini ndaikurudzirawo zvakanyanya kuchengetedza yako vhidhiyo feed pane panguva yepodcast! Sezvo ini ndiri kutaura kumuenzi wangu, ndinotenda vhidhiyo cues yatinotora kubva kune mumwe neumwe inowedzera toni yehunhu pakukurukurirana. Pamusoro pezvo, kana ini ndaimboda rimwe zuva kuburitsa maturu evhidhiyo epodcasts angu, ndinenge ndiine mavhidhiyo futi!
Parizvino, kuchengetedza yangu podcast ibasa rakaringana, hazvo!
Tags: makwara ekuteereratumira kunze maodhi enziraPodcastpodcastingakaparadzanisa makwaraZoomzoom kurekodha
Stirista Simba Rayo Nyowani Chitupa Giraidhi neReal-Nguva Dhata